ဝေဖန်ရေးရာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 16
“စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ” လာကပေါ်- အောင်ကျော် ဆွေးနွေးခန်း(၄) စည်သူအောင်မြင့်။ (မူရင်း- Unity အပတ်စဉ်ဂျာနယ်)။ မေ ၄၊ ၂၀၁၂ လာကပေါ်- ကိုအောင်ကျော် ခုတလော ခင်ဗျားတို့ဂျာနယ်လစ်တွေက အစည်းအရုံးတို့ သမဂ္ဂတို့၊...
တိုက်ခိုက်စာတချို့နဲ့ စပ်လျဉ်းလို့ ရှင်းပြချက် မောင်ဝံသ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်၊ ဧပြီ ၁၉၊ ၂၀၁၂ မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ ခုတလော၊ ခုတလောမကပါဘူး၊ အတော်တောင်ကြာခဲ့ပါပြီ။ Facebook မှာ Mizu yota ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့...
ကာတွန်း – စောငို မတ်လ ၂၈၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
`အကျော်ဇေယျလား အကျော်ဒေးယျလား´ သန်းဝင်းလှိုင်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၂ တလောက မိုးမခဘလော့တွင် စာရေးသူ၏ `သမိုင်းတကွေ့မှ အကျော်ဇေယျ အမျိုးသမီးများ´ စာအုပ် ကြော်ငြာကို တင်ထားရာ၊ အင်တာနက်ပရိသတ်အများစုက `အကျော်ဇေယျ´ အသုံးအနှုန်းကို မှားသည်ဟု...
ရွှေရိုး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၂ တချို့က ပြောကြတယ်။ ပါရမီက ရွှေထွက်တယ်ဆိုပဲ။ ဘာလဲ မိန်းမဆီက ရွှေတွေထွက်သွားတာလားလို့ မေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ ပါရမီတက္ကစီ မောင်းချင်ရင်တော့ စပေါ်ငွေ လာထား ၁၅ သိန်း၊ လစာက...
၀တ်မှုန် (စင်ကာပူ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၂ ကျွန်တော် နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာရေးတရားဟောဆရာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော် နိုင်ငံကိုကောင်းစေချင်တဲ့ ခရစ်ယာန် ဘာသာရေးမီဒီယာလုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်။ အင်တာနက်မှာ 5-Feb-2012 YouTube ခရစ်ယာန်တစ်ဦးရဲ့ဘ၀အကြောင်းကို နားထောင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ၊ သူပြောသလို...
ဒဲ့ဒိုး ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၂ ဒွိဟ အဓိပ္ပါယ်က သို့လော … သို့လော … ဆိုတဲ့ ယုံမှားသံသယကိုဆိုလိုတာပါ။ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ် ပြည်သူလူထုရဲ့တခဲနက်ထောက်ခံယုံကြည်မှုရရှိဘို့ အရေးကြီးပါတယ်။ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ် ယုံကြည်မှုမရှိရင် နိုင်ငံတည်ဆောက်...